Olee otú ị ga - esi bụrụ Pro Viruslization Pro - Ụlọ akwụkwọ nkà na ụzụ IT
4 Ka 2017
Otu esi eme ka pro
Bụrụ Pro Profaịlụ
1. Malite na nmalite.
2. Malite obere.
3. Buru otu Platform na Master ya.
4. Were ya na ọkwa ọzọ.
Ọrụ azụmahịa na-emepe ngwa ngwa karịa oge ọ bụla ọzọ na nchekwa ebe a. Site na usoro a na-aga n'ihu, enwere echiche na echiche ọhụrụ ọ bụla na-emepụta ka ị kechie isi gị.
E nwere ụzọ dị iche iche na-esi eme ka ndị ọkachamara na-agbanyeghị aka na-akpachapụ anya, Otú ọ dị, anyị nwere ụzọ dị mkpa kachasị mkpa nke ga - enyere aka mee ka akụkọ gị bụrụ ihe dị mkpa. Anyị na-edozi nzọụkwụ anọ dị mfe ị nwere ike ịmalite ugbu a iji wuo nkà gị ma gbanwee ghọọ nna ukwu na-adịghị mma.
Na-eburu n'uche ihe mgbaru ọsọ na njedebe iji kwupụta na ị na-eme ihe ọ bụla, ị kwesịrị ịma ihe dị iche iche nchịkọta IT, na-amalite site na nzukọ nkesa. Ntọala ntọala agaghị achọ ihe dị ukwuu, mana ka ị na-arụ ọrụ nke ọma, ọ ga-eme ka ihe dị egwu na-agba ọsọ. Ị ga - ahọrọ ịghara ịlụ agha iji cheta ebubo Linux, ma ọ bụ otu esi edozi ihe nkesa Windows agaghị ebu. Inye ike na nchịkwa onye nchịkwa ga-abara gị uru.
Mmetụta netwọk, kpọmkwem, n'otu aka ahụ nwere ike ịnweta ọkụ. Ngwakọta ọzụzụ nke CompTIA gị na netwọk ga-enye gị ndụmọdụ na ịmepụta nke ọma a ga-enwe VLANs ole na ole na ntinye aka na ngalaba, na-arụ ọrụ netwọk maka ndị ọrụ anụ ahụ gị, na netwọk ikike iji kwurịta okwu, na netwọk dị iche maka gị sava nkesa dị ka achọrọ maka nchekwa. Na ohere na anyị wepụsịrị nkwupụta nke VLANS, ịnwere ọdụ ụgbọ mmiri ole na ole na nkesa ọ bụla maka netwọk ọ bụla, a ghaghị ịmepụta ha niile na ma onye na-ahụ maka ya ma na-agbanwe, ma ọ bụ ozi agaghị eme.
N'oge ahụ, ihe ọ bụla na-aga na 3 na ndị a, ị ga-enwe ezigbo nkà na netwọk.
Enwere ihe nkesa decommissioned nke ochie? Na-agụ! Dilly dally na nchịkọta ụdị VMware nke Microsoft ma ọ bụ Microsoft Hyper-V.
Kedu ka ị si ajụ? Anyị anaghị agwa ya. Gaa mara ya.
Cmon, ị bụ onye enyi IT, ị na-adị ndụ iji tinker ma ghọta ihe ọhụrụ! Ọzọkwa, ọ ga-ewe ụbọchị asaa nke ntinye ederede iji kpuchie ya. Ga-emeri ihe mgbochi na mkpuchi mkpuchi, otú ahụ ka ụzọ kachasị mma ị ga-esi amụta na ịhapụ ihe dị mfe bụ ịkwa ya.
Ozugbo i mechara, ị ga-enwe sandbox ebe ị nwere ike igwu egwu. Emepụta ihe nkesa Windows, mee ka ọ bụrụ onye nchịkwa oghere, gụnyere ihe nkesa IIS maka akara nkịta ụlọ ọrụ, gụnyere igbe Linux, ma webata ngwa syslog ma ọ bụ ihe ọhụrụ ọ bụla ị chọrọ igwu egwu. Naanị etinyela ihe ọ bụla dị na ya na netwọk ihe okike gị. Buru n'uche, nke a bụ ihe mkpesa, ihe nkesa 12 nke afọ abụọ na ọhụụ abụọ na ihe nhụsianya nke ndị aka ike.
Anyị kwuru na VMware na Hyper-V tupu. Ha abụọ bụ ndị na-elekọta ụlọ, ihe ntanetị ngwaahịa nke na-emechi CPU, RAM, na ike iji rụọ ọrụ iji rụọ ọrụ ndị ọrụ ahụ. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ụdị ndị nwere ike ịnweta, ndị abụọ a ma ama bụ VMware vSphere na Microsoft's Hyper-V.
Ha abụọ na-esi ike ịzụlite ihe, na otu, na-enweta ihe ka ukwuu site na mpempe akwụkwọ. Ma ihe omumu nke oma, ma i kwesiri igosi oke ikike n'otu uzo. Na ohere na ị na-agba ahịa ụlọ ahịa Microsoft, Hyper-V bụ mkpebi a na-apụghị ịgbagha agbagha, karịsịa na ihe kpatara ya na ọ na-abịa dịka nhazi ọ bụla nke Windows Server kemgbe 2008. Na ohere na ị nwere sava Linux ọ bụla ma ọ bụ nwere mmasị na ihe ndị na-abụghị Microsoft wee lelee vSphere.
N'ọnọdụ ọ bụla, CBT Nuggets ka ị nwetara maka ihe niile ị chọrọ ịzụ. Microsoft na-ekpuchi Hyper-V kpamkpam na MCSA na MCSE nkesa na-akwado ya, na nkwenye Ntu VCP-DCV nke VMware bụ nnukwu ihe ịbanye na vSphere.
Ị nwere nkà, ogbo, na ndị na-ahụ maka ya, n'ihi ya, ị maara nke ọma na ị ga-abanye na njirimara nke na-adịghị mma. Ka ị na-aghọpụta usoro ịmepụtara gị, akụkụ kachasị mkpa nke hypervisor to use will be high accessibility. A na-echebara nke a echiche na onye na-arụ ọrụ nke igwe arụmọrụ na-amalite site na otu onye na-ahụ anụ ahụ wee banye na nke ọzọ mgbe mmadụ kwụsịrị.
Enwere ego a na-akwụ ụgwọ, ma ọ na-amalite site na ngwaike a na-agbanyeghi. Inye ego ndi ozo, o doro anya, nke a bu ihe karia nzoputa na choro site n'elu elu. N'oge a, ị kwesiri ịma ihe iji chebe ọganihu ndị a na otu ha ga-esi belata ego na ego, ma site na ngwongwo ngwaike na nchịkwa dị mkpa.
Nje Virtualization agbanwewo IT mgbe niile ma nwee ike inyere aka gị ọrụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị ugbu a ka ị na-emeso ebe dị mma, ọ na-adabere na gị ịmalite ma tinye mgbalị na ike iji mụta ihe, dị ka ndị a bụ nkà ndị meworo ka ọ bụrụ ụgwọ ọrụ maka ihe niile IT.
Ihe Nlekọta 7 dị ịtụnanya banyere Asambodo VMware
Ihe na18 Sep 2018
Ihe na17 Sep 2018
Okwu Mmalite GDPR: The Who, What, When, Why, and Where of GDPR
Ihe na23 Aug 2018
Ihe na03 Aug 2018
Mmezu site na Asambodo AWS
Ihe na13 Jun 2018